Tonizia: Mpiasam-panjakana Ambony Nosamborina fa Nanakiana ny Ministeran’ny Atitany · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Mpiasam-panjakana Ambony Nosamborina fa Nanakiana ny Ministeran'ny Atitany
Voadika ny 05 Jona 2011 13:21 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Revolisiona ao Tonizia 2011.
Samir Feriani, mpiasam-panjakana ambony tao amin'ny Ministeran'ny Atitany, dia nosamborin'ny polisy tsy an-kitsitsy mihitsy no sady nentina tany amin'ny toby miaramila iray tao Tunis renivohitra ny 29 May teo. Andro maro talohan'io, namoaka taratasy roa tao amin'ny gazetiboky “Al-Khabeer” ho an'ny vahoaka Toniziana, ka tao anatin'izany no nanakianany ny politika fandraisana mpiasa ao amin'ny ministera.
Tao anatin'ireo taratasiny, voalaza ho nanoratra izy hoe ireo mitàna toerana tena ain-dehiben'ny ministera no tompon'andraikitra amin'ireo heloka bevava nitranga tany amin'ny faritanin'i Kasserine, izay nahafatesana mpanao hetsi-panoherana maherin'ny 60 nandritra ny fitakiam-panovàna. Miteny koa izay fa ireo antontan-taratasy mampifaningotra ny filoha teo aloha niongana amin'ny Mossad avy any Israely, dia ninian'ireo manampahefana tao amin'io ministera io nopotehana.
Ilay fihetsika dia nahatohina ireo Toniziana mpitoraka bilaogy izay nihevitra hatrizay fa hoe ny fisamborana olona noho ny filazàny izay tao an-tsainy sy ny fanehoany hevitra, dia efa tantara fahiny nivalona niaraka tamin'ny fitondràna teo aloha. Ity ny famioahana ny sasantsasany amin'ireofanehoan-kevitra tao amin'ilay vohikala fitorahana bilaogy kiritika:
@riadheh:ça se passe en Tunisie post ZABA
Taorian'ny vanimpotoana ZABA no mitranga izany [ZABA solon'anarana nomena an'i Zeine El-Abidine Ben Ali]
@walidsa3d:#SamirFeriani no ilay Bradley Manning ho an'i Tonizia, tsy maintsy manohana azy isika.
@Anis_BenHamida: Début de la révolution à l'intérieur du #MI ? #Tunisie
@Anis_BenHamida: Fiandohan'ny revolisiona ao anatin'ny Ministeran'ny Atitany ve?
@MehdiAyadiCorra: Samir Feriani,haut fonctionnaire de police,kidnappé pour avoir dénoncé les pratiques du #MI.Il va croupir dans les geôles #Tunisie
@MehdiAyadiCorra: Samir Feriani, mpiasam-panjakana ambony iray, nalaina an-keriny fa niampanga ny fomba ratsy fanao ao amin'ny Ministeran'ny Atitany [#MI]. Hijaly any am-ponja ilay zalahy iny
@emnamejri:Liberté pour Samir feriani http ye5i winhom nos journalistes, wini la société civile, les partis politikes #Tunisie
Fahafahana ho an'i Samir Feriani. Mba aiza daholo ireo mpanao gazetintsika e, ny fiarahamonina sivily ary ny antoko politika?
Ilay bilaogera Yessine Ayari (@yassayari), dia nitafatafa tamin'ny vadin'Ing Feriani – Leila Friani, izay nanamafy fa ny vadiny dia niala tao an-trano ny Alahady maraina ary tsy mbola tafaverina hatramin'izao, ary ny Alatsinainy izy vao nilazana fa hoe voasambotra izy. Nanontany azy i Ayari momba ny manodidina io fisamborana am-badiny io. Namaly izy hoe ” tao anaty fiarany izy ary nisy fiara roa hafa nanaraka azy. […] Tamin'ny fomba maharikoriko no nisamborana azy, sahala amin'ireny fakàna an-keriny ireny.” Miteny ihany koa izy fa voaheloka ho “nanely tsiambaratelo” ny vadiny.
Tao amin'ny Facebook, nihazakazaka namorona pejy hanehoana ny fanohanany an'i Feriani ireo mafàna fo ary miantso ny famotsorana azy avy hatrany. Anisan'ireny pejy ireny ny Libérez Samir Feriani’ [Fr] “Afaho i Samir Feriani” amin'ny teny Anglisy, sy ny Tous Unis avec Samir Feriani[Fr] “Miara-mirona amin'i Samir Feriani” amin'ny teny Anglisy.